> Resource> iTunes> otú nyefee Podcast si iPhone ka iTunes
Enweela m ụfọdụ ịtụnanya Pọdkastị na m PC na m synced ha ka ha iPhone dị ka mma. Otú ọ dị, faịlụ niile na m iTunes furu efu mgbe m arụnyere m PC n'ihi na ọ bụ jiri. Enwere ụzọ nyefee Pọdkastị si iPhone ka iTunes? O yiri iTunes apụghị ime ya. Echiche ọ bụla?
Ọ bụ nnọọ mfe nyefee Pọdkastị si iTunes ka iPhone, ma ọ bụghị ikpe na-ebufe Podcast si iPhone azụ iTunes. iTunes mgbe na-ahapụ gị nyefee Pọdkastị si iPhone ka iTunes n'ihi na ọ bụghị n'aka ma Pọdkastị na gị iPhone nwere idetuo nri mbipụta ma ọ bụ. Luckily, ka nwere ndị ụfọdụ ọrụ gburugburu ka mmekọrịta Pọdkastị si iPhone ka iTunes. Ebe a ga-amasị m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) nyefee video na ọdịyo Pọdkastị si iPhone ka iTunes.
Download Pọdkastị iPhone transfer ngwá ọrụ ka mmekọrịta Pọdkastị si iPhone ka iTunes!
Wondershare TunesGo (Windows) na Wondershare TunesGo (Mac) bụ ọkachamara iPhone transfer ngwaọrụ. Ha na-enyere ị nyefee Pọdkastị si iPhone ka iTunes mfe na ngwa ngwa. Lee, m na-ekwu okwu otú nyefee Pọdkastị si iPhone ka iTunes na Wondershare TunesGo. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, na-agbalị Wondershare TunesGo (Mac). Nzọụkwụ ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ.
Na-agba ọsọ Wondershare TunesGo na-eji iPhone eriri USB jikọọ gị iPhone na gị PC. Wondershare TunesGo ga chọpụta gị iPhone na-egosipụta na ya Ama ke akpan window. Nke a iPhone ngwa arụ ọrụ nke ọma na Windows PC.
Nzọụkwụ 2. Nyefee Pọdkastị si iPhone ka iTunes
Ke akpan window, pịa "Media". Ekem, ke Media window, n'elu, ị ga-ahụ "Pọdkastị". Pịa ya na-egosipụta niile Pọdkastị na gị iPhone. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe niile Pọdkastị na gị iPhone na-egosipụta ebe a. Họrọ chọrọ ndị, pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka". Na esiri-ala ndepụta, họrọ "Mbupụ na iTunes Library."
Ọ bụ ya! Na nke abụọ, ị ga-ahụ na ihe niile Pọdkastị na-agafere si gị iPhone ka iTunes Library on PC. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwekwara ike mbupụ iPhone Podcast gị na kọmputa. Na Wondershare TunesGo, na ị na-enwe ike jidere Pọdkastị si PC ka iPhone dị ka mma.
Gbalịa Wondershare TunesGo nyefee iPhone Pọdkastị ka iTunes!
Na-ekiri ndị Video Ịmụta otú nyefee Podcast si iPhone ka iTunes
Watch Video Ịmụta otú nyefee Podcast si iPhone ka iTunes